Hosea 14 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 SirayeliSirayeli, buya, uze kuYehova, uThixouThixo wakho; ngokuba ukhubekile ngobugwenxa bakho.
2 Thabathani niphathe amazwi, nibuyele kuYehova; yithini kuye, Sixolele bonke ubugwenxaubugwenxa, wamkele izinto zethu ezilungileyo, ukuze sinikele iinkunzi zeenkomo ezintsha, imibulelo yomlomo wethu.
3 UAsiriya akayi kusisindisa, asiyi kukhwela emahasheni, asiyi kuba sathi kumsebenzi wezandla zethu, Thixo wethu; kuba kuwe inkedamainkedama ifumana imfesane.
4 Ndiya kukuphilisa ukubuya kwabo umvaumva, ndiya kubathanda ngesisa; ngokuba umsindoumsindo wam ubuyile kuye.
5 Ndiya kuba njengombethe kuSirayeli; uya kutyatyamba njengenyibiba, endelisele iingcambuiingcambu zakhe njengeLebhanon.
6 Aya kunaba amasebe akhe, bube njengomnquma ubuhle bakhe, ivumbaivumba lakhe libe njengeLebhanon.
8 Efrayim, yintoni na esenam nezithixo? Okwam ndiyamphendula, ndimkhathalela; ndinjengomsipres oluhlaza, siyafunyanwa kum isiqhamo sakho.
9 Ngubani na olumkileyo, aziqonde ezo zinto? Ngubani na onengqondo, azazi? Ngokuba zithe tye iindlela zikaYehova; ahamba ngazo amalungisa; ke bona abakreqi baya kukhubeka kuzo.